Gịnị bụ toxoplasmosis na otú o si emetụta afọ ime | Bezzia
Nke Torres | 11/05/2022 23:55 | Ime
Toxoplasmosis bụ ọrịa na-efe efe, nke a na-akpọ "toxoplasma gondii" kpatara aha ya. Onye ọ bụla nwere ike bute ọrịa a, mana mgbe ọ bịara nwanyị dị ime ihe ize ndụ nwere ike ịnwụ. Ya mere, ọ dị ezigbo mkpa igbochi ọrịa site n'izere iri nri ụfọdụ nwere ike ịnwe protozoan nke na-ebute ọrịa ahụ.
Nke a bụ n'ihi na nje nje na-ebute ọrịa ahụ nwere ike ịgafe placenta ma bute nwa ebu n'afọ, nke ga-ebute ọrịa a mụrụ, ya bụ, tupu a mụọ ya. Ọ bụrụ na nke a na-eme n'ime izu mbụ nke ime ime, nwa ebu n'afọ nwere ike ịta ahụhụ dị iche iche na mmepe ya, yana nsonaazụ kacha njọ. N'ebe a, anyị na-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma toxoplasmosis na otú o si emetụta afọ ime.
1 Toxoplasmosis n'oge ime
1.1 Ihe ize ndụ nye nwa ebu n'afọ
1.2 Na-egbochi toxoplasmosis n'oge ime
Toxoplasmosis n'oge ime
Durante afọ ime Ọ dị mkpa ịgbaso ntuziaka ụfọdụ na ndụmọdụ gbasara nri na àgwà ndị ọzọ, ebe ọ bụ na e nwere ihe ize ndụ dị iche iche maka mmepe nwa ebu n'afọ. Otu n'ime ha bụ ọrịa toxoplasmosis. ọrịa nwere ike ibute n'ụzọ dị iche iche.
Site na oriri anụ esi ya nke nta ma ọ bụ nke ọma ma nwee nje nje ahụ.
Site na fọduru nke nje nje nwere ike ịdị na nsi pusi.
Site na-efe efe na gafere placenta site na nne rue nwa ebu n'afọ.
Ya bụ, toxoplasmosis adịghị agbasa site na mmadụ gaa na onye, ​​ma e wezụga n'oge ime. Na n'ihi nsogbu agbakwunyere na a ka enwebeghị ọgwụ mgbochi taa, ọ dị mkpa iji zere ofufe n'oge ime ime. N'ụzọ dị otú a, a na-ezere ihe ize ndụ dị mkpa na mmepe nke nwa ebu n'afọ. Karịsịa n'ime izu mbụ nke ime ime, ebe ihe ize ndụ nke nwa ebu n'afọ dị ọbụna karị.
Ihe ize ndụ nye nwa ebu n'afọ
Toxoplasmosis nwere ike ịdị njọ karịa ma ọ bụ dị ntakịrị maka nwa ebu n'afọ, karịsịa n'ime izu mbụ ma ọ bụ ruo n'ọnwa atọ nke atọ. N'ime ihe ndị nwere ike ime nsonaazụ nwere ike ime mgbe ị na-ebute ọrịa ahụ Maka toxoplasmosis bụ ihe ndị a.
Ikike omumu dị obere, nke a maara na usoro ahụike dịka nkwụsị nke uto.
Nsogbu ọhụụ, gụnyere ìsì.
ihe ize ndụ nke ime imekarịsịa na trimester mbụ nke afọ ime.
Toxoplasmosis nwekwara ike emetụta mmepe nke Central ụjọ usoroụbụrụ, ịnụ ihe, imeju, splin, usoro lymphatic na ọbụna ngụgụ.
Mgbaàmà nwere ike ịdị iche iche na nke ọ bụla, ihe na-emekarị bụ igbu oge na nchoputa ozugbo a mụrụ nwa. N'ozuzu Anaghị ekele ha na anya gba ọtọ wee pụta ìhè ka enwere igbu oge ma ọ bụ ọgbaghara na uto nwa. Nanị ụzọ a ga-esi achọpụta ọrịa toxoplasmosis n'oge ime ime bụ site na amniocentesis, ule intrauterine nke a na-eme mgbe enwere ihe ịrịba ama nke a na nsogbu ndị ọzọ.
Na-egbochi toxoplasmosis n'oge ime
Enwere ike ịchọpụta ihe mgbochi na uche na toxoplasmosis na nyocha ụlọ ọgwụ emere site na mmalite nke afọ ime, nke. adịghị egbochi ya ịbanye n'ime oge niile dị ime. Iji zere nke a, ịkwesịrị ịgbaso ndụmọdụ midwife gị, nke ga-abụ ihe ndị a n'ozuzu ya.
Erila anụ esighị ya nke ọma na/ma ọ bụ na mbụ jụrụ oyi.
Zenarị nri a na-eri raw, dị ka sausaji ma ọ bụ carpaccio.
were naanị mmiri ara ehi na usoro nke na pasteurized. Nke pụtara na ị nweghị ike were meringue ma ọ bụ ngwaahịa nwere akwa raw.
Ọ bụrụ na ị nwere nwamba, ị ga-emerịrị ya zere kọntaktị na nsị nke bụ ebe a na-ahụ foduru nke nje ma ọ bụrụ na anụ ahụ eriela anụ ndị ọzọ wee bute ọrịa.
Nke a apụtaghị na ị ga-esi na pusi gị pụọ, kwụsị ihicha igbe nke pusi gị ka ndị ọzọ mee ya. Ma ọ bụrụ na ị ga-eri nri, jide n'aka na ịhọrọ ngwaahịa esichara nke ọma. zere raw inine ọ bụrụ na ha adịghị ọcha nke ukwuu na nke kachasị mkpa, nwee obi ụtọ na afọ ime gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ndị nne » Ime » Kedu ihe bụ toxoplasmosis na kedu ka o si emetụta afọ ime?